Iindaba -Ukukhetha njani umenzi wakho wenaliti yenaliti
Inaliti nokuvunda na uhlobo isixhobo ekwenzeni zeplastiki okanye iintsimbi. Ubume ngenaliti ngumngundo ngqo kwaye intsonkothile, kwaye kufuneka ubomi inkonzo eliphezulu amakhulu amawaka imijikelo inaliti. Luhlobo lwezixhobo zexabiso eliphezulu, kwaye umgangatho wayo udlala indima ebonakalayo kwimveliso enkulu yenaliti elandelayo. Ke indlela yokukhetha ukwenziwa kwenaliti yakho kubaluleke kakhulu kuwe. Inaliti yokubumba ngumatshini wenene ngaphandle kwamandla, okwenza ukuba ibe yinkqubo yobuchwephesha kunye nexesha elininzi. Kunzima kakhulu kunokuba abantu becinga ukuba ungasifumana njani isikhunta esifanelekileyo ngexesha elifutshane ngexabiso elifanelekileyo. Ke ngoko, ukukhetha inkampani efanelekileyo yokubumba kubaluleke kakhulu kwimpumelelo yomngundo wakho kunye neemveliso.
Isalathiso sokuvavanya umenzi wokubumba:
1.Itheknoloji kunye noMgangatho
Ixesha lokukhokela kunye lokuhambisa
* Makhe sabelane ngolwazi lweenkcukacha malunga nendlela yokukhetha amaqabane akho enziwe ngenaliti:
1. Umenzi kufuneka abe neqela lobuchule lobunjineli.
Zonke izinto zokubumba zenziwe ngokuhambelana nemizobo yoyilo lobunjineli. Imizobo yokubumba yenzelwe iinjineli. Ukubumbela elungileyo kusoloko kuvela kuyilo sokubumbela ogqibeleleyo. Iinjineli zoyilo lweMold kufuneka zibe nolwazi olufanelekileyo kunye namava kwimihlaba enxulumene nokubumba.
Ukusilela koyilo lwesikhunta kuhlala kubangela ukuguqulwa kweendleko ezininzi okanye ukungaphumeleli okanye ukungunda. Ke iqela loyilo ekumgangatho ophezulu kubaluleke kakhulu.
Ukongeza kwiinjineli zoyilo lokungunda, kodwa kananjalo kufuneka ubunjineli beenkqubo zobungcali, zixhomekeke kubo ekuqulunqeni ngokufanelekileyo inkqubo yokuqhubekeka, ukufezekisa ukusebenza ngokukuko, ukuveliswa kweendleko eziphantsi.
2.Lithini inqanaba loomatshini kunye nezixhobo ezisetyenziswa yinkampani yokwenza umngundo?
Inqanaba lobuchwephesha kunye nokuchaneka kwezixhobo zomatshini kumisela ngokuthe ngqo ukuchaneka, ixesha kunye neendleko zesikhunta. Kunzima ukucinga ukuba umatshini ongaxutywanga, ongasasebenziyo nocoselelo olusezantsi unokuvelisa isikhunta esikumgangatho ophezulu ngexesha elithile. Ukulandela ngokungaboniyo ukungunda kwexabiso eliphantsi kuya kuba kumgangatho ophantsi kunye nomjikelo omde.
Iworkshop yokubumba eqhelekileyo ixhotyiswe ubuncinci i-4-5 i-CNC, i-EDM, oomatshini abasika ii-WIRE-CUT. Ukuthintela impembelelo yokunxiba koomatshini, ukusetyenziswa kwexesha koomatshini abasetyenziselwa ukuchaneka ngokuchanekileyo akufuneki kudlule iminyaka emi-5-7.
Ke ucebise ukuba ucacise ukuba yeyiphi inqanaba lenkampani ngaphambi kokukhetha njengeqabane lakho.
3.Uluphi uhlobo lwesikhunta elinokwenziwa yinkampani, kwaye zingaphi izinto abazenzileyo ngenyanga?
Inkampani enamava eemveliso ezifanayo zokubumba inokuziphepha iimpazamo. Ezinye iimveliso ezikhethekileyo, ezinje ngemisonto, iigiya, ukubumba ngenaliti emibini, i-IMD kunye neenxalenye ezincinci zomngundo, zifuna oomatshini abakhethekileyo kunye neendlela zokwenza. Ke ungagcina ixesha ngokwazi uhlobo lokungunda kunye nokuba yenziwe lixesha elingakanani inkampani kwangaphambili.
4.Yintoni indleko yokubumba?
Iindleko zesikhunta zibandakanya izinto ezininzi ezingasoloko zilinganiseka ngokokwakhiwa kwesikhunta. Oku kubandakanya ubuchule bokwakha ukungunda obubandakanya ubuchwephesha kunye nobuchule bokwakha ukungunda okunokubangela ukunciphisa amaxesha okujikeleza, anokulinganisa ukonga iindleko zokuvelisa kubomi bemveliso.
Ngaphandle kwesinyithi, ubhedu, imbaleki eshushu kunye nezinye izinto ezibonakalayo ezisetyenzisiweyo ekwenziweni komngundo, kunye nexabiso lokuchwetheza kunye nokudibanisa uvavanyo lomngundo koomatshini, ixabiso elingezantsi lomngundo kufuneka liqwalaselwe:
A) Iindleko zobunjineli
B) Iindleko zoMsebenzi kwakhona
C) Iindleko zokuHambisa
D) Ubomi beMold
5. Iinkonzo ezinxulumeneyo okanye ezandisiweyo.
Ngokwesiqhelo awudingi kuphela ukuba umenzi akwenzele ukungunda, kodwa ufuna ukuba benze uyilo oluthile lwemveliso, ukungqinisisa kwaseprotype, imveliso yokubumba inaliti kunye nezinye iinkonzo eziyimfuneko zokuhlanganisa kunye nokupakisha. Zama ukugqiba iinkqubo ezininzi kuphahla olunye ukonga ixesha kunye neendleko.
6. Ulawulo lomgangatho nolawulo.
Kwimisebenzi yokuvelisa, nokuba kukwenziwa kwe-mold okanye i-injection molding kunye ne-assembly, imigangatho yemveliso kunye nemigangatho yokusebenza kufuneka iqulunqwe kwaye isungulwe ukulinganisa nokuqinisekisa ukuphunyezwa ngokuchanekileyo kwekhonkco nganye yemveliso, kwaye ekugqibeleni ufumane iimveliso kunye nomgangatho kunye nokusebenza ichazwe ngabathengi. Ke ngoko, umenzi kufuneka abe nenkqubo yolawulo esemgangathweni egqibeleleyo kunye nenkqubo.
7. Inkampani yokuvelisa kufuneka ibe nolawulo olugqwesileyo.
Kuya kufuneka ujonge ukuba inkampani iyasebenza na xa kusiziwa ekuhambiseni iimveliso ezigqityiweyo ngexesha kwaye kwindawo oyithandayo. Ayinamsebenzi ukuba iimfuno zakho zifunwa kangakanani. Into ebalulekileyo kukuba bayise kuwe njengoko wathembisa.
izinto xa ukhetha umenzi ngumngundo
8.Thetha ngaphambi kokuba wenze isigqibo.
Usenokuba wenze iingcebiso ukuya kwezine kodwa ngokuqinisekileyo ayizukulimaza ukuba uya kudibana nosapho lwakho, izihlobo, okanye ingcali ngaphambi kokwenza isigqibo sokugqibela. Ukuba iyakunceda, unokukhangela kwi-intanethi kwiinkampani zokubumba ezithembekileyo zeplastiki.
Inkampani yeMestech ibandakanyeka kuyilo lokungunda kunye nokuvelisa kunye nenaliti yokuvelisa imveliso ngaphezulu kweminyaka eyi-10, ineqela lobunjineli. Umzi-mveliso uxhotyiswe ngeseti epheleleyo yezixhobo zokulungisa ukungunda i-CNC, intlantsi yombane, ukusika ucingo kunye nesixhobo sokulinganisa sokulinganisa esintathu. Kuxhotyiswe ngeentlobo ezingama-30 zombala omnye kunye nemibala emibini yokubumba oomatshini ukusuka kwiitoni ezili-100 ukuya kuma-2000. Sibonelela abathengi basekhaya nakwamanye amazwe ngomngundo wokuthumela ngaphandle ngokuhambelana nomgangatho waseTshayina, umgangatho weHASCO, umgangatho we-DME okanye umgangatho weMISUMI, kunye nenkonzo yokumisa inaliti, ukupeyinta, isikrini sesilika, ukucoca, ukutshisa okushushu kunye nelaser.Sinethemba lokuba liqabane lakho lomnikezeli kwaye sikubonelele ngomgangatho ophezulu weemveliso zokungunda kunye nenaliti kunye neenkonzo.